အခမဲ့ဂိမ်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူ,သင်သည်မည်သည့်အခြားညစ်ညမ်းဆိုက်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စာကြည့်တိုက်ကသင့်ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်အမျိုးအစားတွေ၊အမျိုးသမီးအမျိုးအစားတွေ၊သင်ရောက်နေတဲ့အမျိုးအစားတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သင်များသောအားဖြင့်လိင်ပြွန်ပေါ်တွင်တွေ့သမျှသောအမျိုးအစားများကိုယူပါတယ်,ပြီးတော့ကျနော်တို့သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဂိမ်းထည့်သွင်းဖို့သေချာပါစေ။ ကျနော်တို့ဒါဝေးဤမျှလောက်များစွာသောခေါင်းစဉ်ကိုစုဝေးပါတယ်,ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကျနော်တို့စစ်ဆေးမှုများတွင်အရည်အသွေးကို၏စံချိန်စံညွှန်းများထားရှိမည်။ ကျနော်တို့အမြင်မဆိုအချက်အနေဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေသောစုဆောင်းမှုအတွက်သာအိုင်တီဂိမ်းများပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်ပြု၏။, ဂရပ်ဖစ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့များမှာ,လှုပ်ရှားမှုအင်ဂျင်ဇာတ်ကောင်သဘာဝကျကျရွှေ့အောင်နေဖြင့်လက်တွေ့ကျကျခံစားမှုဖန်တီးသွားကြသည်,ပြီးတော့လက်ဝါးကပ်တိုင်-ပလက်ဖောင်းရရှိနိုင်မှုသင်တို့သည်နောက်နေပါစေသင်အသုံးပြုနေတဲ့ဘာကိရိယာကိုသင့်ဘရောက်ဇာ၌ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်အာမခံသွား.
ဤဂိမ်းများ၏အရည်အသွေးကိုသင်အခမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားဆိုဒ်များအပေါ်မတိုင်မီကစားခဲ့ကြအံ့သောငှါဘာမှမှလမ်းသာလွန်သော်လည်း,ငါတို့ရှိသမျှသည်အခမဲ့အဘို့ထိုသူတို့ဆက်ကပ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ကေပးေခ်ဖို႔အတြက္ေငြေၾကးအလံုအေလာက္ရရွိဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးဂိမ္းကစားသူေတြအေနနဲ႔ေပးေခ်ဖို႔ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ သင့္ဆီကေငြကိုေတာင္းစရာမလိုပဲနဲ႔ေပးေခ်ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုကိုေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,ငါတို့သည်လည်းအများအပြားကြော်ငြာများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှောင့်အယှက်မရှိဘဲထိုသို့ပြုမှစီမံခန့်ခွဲ။ သင်ဒီမှာနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ၏စုံတွဲတစ်တွဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာပေမယ့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်,သင်ပင်သူတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်သတိထားမိမည်မဟုတ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောအခြားကြောက်မက်ဘွယ်အင်္ဂါရပ်များရှိပါတယ်။, သူတို့နှင့်ပတ်သက်၍အားလုံးဖတ်ပြီးအောက်ပါစာပိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး,ငါတို့ရှိသမျှသည်လက်တွေ့ကျကျလိင်ကွင်းရှိသည်,သင်ဂိမ်းအတွက်မျိုးအမျိုးမျိုးနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့အများကြီးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုငါပေးမည်။ နှင့်ဤဂိမ်းပင်သင်ရှုပ်ထွေးစိတ်ကြိုက်မီနူးမှတဆင့်သင်ပါလိမ့်မယ်ဇာတ်ကောင်၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သင်နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်တွေကိုထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ဂိမ်းတွေရှိတယ်။ ဤရွေ့ကားရုပ်ပြောင်လိင်ဂိမ်းသင်အမြဲငုံ့မယ့်ဘယ်သူကိုများအတွက်ကာတွန်း,ကာတွန်းစီးရီးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးမှသူငယ်,အတူလာမယ့်နေကြသည်။
သငျသညျယုတ်ဂိမ်းကစားခြင်း၏ဂြိုလ်ဘုံ၌သင်တို့ကိုထားမည်ကိုပိုပြီးရှုပ်ထွေးသောအရာတစ်ခုခုကိုခံစားချင်လျှင်,ငါတို့သည်ငါတို့၏ဂိမ်းများနှင့်အတူလာကြ၏။ သူတို့ကသငျသညျအကွောငျးအမျိုးမျိုးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သင်၏ကြက်သီးထအဆင့်အထိရှိသည်တံ့သောတစ်ဦးထက်ပိုသောပုံမှန်ဂိမ်းခံစားချက်ရှိသည်။ ဤကဏ္ဍတွင်သင်ပင်အချို့သောသားမွေးလိင်ဂိမ်းများတွေ့နိုင်ပါသည်နှင့်ကျွန်တော်ထိုကဲ့သို့သောထပ်မံအဖြစ်လူကြိုက်အများဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းဗီဒီယိုအမည်ဝှက်အချို့၏ဗားရှင်းများ,အလို,သို့မဟုတ်ဂူးဂဲလ်ရှိသည်။
သင်ပိုမိုအစွန်းရောက်တစ်ခုခုချင်လျှင်,ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်၏ကြှနျတေျာ့အပိုင်းရှိသည်။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္သင္သည္ဘ၀အတြက္ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈစတင္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ စုဆောင်းခြင်းလည်းအချို့ရိုင်းနဂါးလိင်ဂိမ်းများနှင့်အထွတ်အထိပ်ဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်ဖြစ်ပါသည်,အပေါင်းကိုယ်ဝန်လိင်ဂိမ်းလည်း.
သင်ဤဂိမ်းကစားနိုင်မီသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဂိမ်းနေစဉ်အဘယ်သူမျှမသိရပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလုံးဝပလက်ဖောင်း,ပြေးပါ။ ဒီမှာကွဲပြားခြားနားမယ့်အရာငါတို့သည်သင်တို့ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘဲခံစားနိုငျကွောငျးအခြို့သောကြောက်မက်ဘွယ်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျမှတ်ချက်ကဏ္ဍများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပျဉ်ပြားမှတဆင့်အခြားကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုသေသပ်စွာဖွဲ့စည်းထားပြီးကြည့်ရှုခြင်းကိရိယာများသည်သင့်အားအချိန်မလပ်သင်လိုချင်သည့်အကြောင်းအရာမျိုးသို့ရောက်ရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။, ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏အင်တာနက်ကိုအခမဲ့လိင်ပြွန်၏တဦးတည်းတူတွေအများကြီးကြည့်,ဒါပေမယ့်အစားရုံရုပ်ရှင်တွေကြည့်၏,အခမဲ့ဂိမ်းညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်သင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဂိမ်းမှတဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်.